Hirshabelle oo haadaan ka tuurtay rajadii laga qabay in 60 cisho doorashada ku qabsoomto | Dhacdo
Hirshabelle oo haadaan ka tuurtay rajadii laga qabay in 60 cisho doorashada ku qabsoomto
Maamulka Hirshabelle ayaa qaadacay Shirka Golaha Wadatashiga Qaran, ee toddobaadkii hore uu Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble isugu yeeray Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, si looga arrinsado wixii ka qabsoomay heshiiskii 27-kii May.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada HIrshabelle ayaa lagu sheegay inaanay Hirshabelle ka qaybgeli doonin Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee lagu wado in uu ka furmo Magaalada Muqdisho.
Warsaxaafadeedka Hirshabelle ayaa u qornaa “Dowladda Hirshabelle waxay cadeyneysaa inaysan qayb ka ahayn Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Dowladda Federaalka, Dowladaha Xubnaha ka ah iyo Maamulka Gobolka Banaadir berri uga furmaya Magaalada Muqdisho.
Dowladda Hirshabelle maadaama aysan talo ku lahayn qabsoomidfa shirka, wixii ka soo baxa ma noqon doonaan wax quseeya Dowladda Hirshabelle.
Ugu dambeyn Hirshabelle waxa ay dhowri doontaa fulinta Heshiiskii 17dii September iyo kii 27dii May ee lagu saxiixay Magaalada Muqdisho.”
Warsaxaafadeedka Hirshabelle ayaa imaanaya, xilli Madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) uu ka maqan yahay Magaalada Muqdisho, halka madaxdii kalena ay joogto.
Diidmada Hirshabelle ayaa hog dheer ku sii rideysa rajadii laga qabay in doorashada dalka ay ku qabsoomi doonto muddadii lixdanka cisho ahayd ee lagu heshiiyay.
Shan qodob oo muhiim u ahaa heshiiskii 27-kii May ayaa waxaa ka qabsoomay hal qodob oo keliya, waana qodobka xalinta cabashada la xiriirta Guddiyada Doorashooyinka ee Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed, oo Dowlad Goboleedyada ay soo wada gudbiyeen, halka qodobadii kalena wax qabsoomay aanu jirin.
Siyaasiyiinta ayaa kuu sheegaya in cid weliba ay u muuqato inaanay hirgelin doonin lixdanka maalmood ee lagu ballamay in doorashada ay ku dhacdo. Qaarkoodna waxayba qabaan inaanu Ra’iisal Wasaaruhu u madaxbannaanayn shaqadii loo igmaday.
Si kastaba ha-ahaatee Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaan weli ka hadlin tallaabada ay Hirshabelle kaga baaqsatay shirka Muqdisho.